Ganacsiga ayaa abaalmarin ka badan $ 8.7 milyan si kor loogu qaado waxtarka tamarta iyo qorraxda ee dhismayaasha dadweynaha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsiga ayaa abaalmarin ka badan $ 8.7 milyan si kor loogu qaado waxtarka tamarta iyo qorraxda ee dhismayaasha dadweynaha
Nidaamka tartanku wuxuu tilmaamayaa 39 mashruuc oo la soo jeediyey ee degmada dugsiga, tacliinta sare, xarumaha dawladaha hoose iyo gobolka kuwaas oo yaraynaya kharashka hawlgalka iyo qiiqa CO2. OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta shaacisay $ 8.7 milyan oo deeq ah oo la siinayo dawladaha hoose, iskuulada iyo wakaaladaha gobolka ee loogu talagalay 39 mashruuc oo la soo jeediyay oo ka socda gobolka oo dhan kuwaas oo kordhin doona waxtarka tamarta iyo isticmaalka tamarta qoraxda iyo yaraynta qiiqa kaarboon-ka-dioxide (CO2). "Sababtoo ah kororka cajiibka ah ee dadkeena iyo dhaqaalaheena, dhismayaashu waxay ka mid yihiin isha ugu dhakhsaha badan ee sii kordheysa qiiqa ka baxa gobolkeena," Jay Inslee. "Ku hogaaminta tusaale ahaan maalgashiyada si loo kordhiyo waxtarka tamarta loona rakibo nidaamyo tamar badan oo la cusboonaysiin karo dhismayaasha dadweynaha ayaa ka mid ah talaabooyinka ugu muhiimsan ee aan ka qaadi karno yoolalkayaga yareynta kaarboonka dagaalka badan 15ka sano ee soo socda." Waxqabadka Tamarta. Gobolka ayaa $ 7.1 milyan ku abaal mariyay 28 mashruuc oo la soo jeediyay kuwaas oo la filayo inay keydiyaan in ka badan $ 1.4 milyan kharashyada tamarta iyo in ka badan shan milyan oo galaan oo biyo ah sanadkiiba. Intaa waxaa sii dheer, qiyaastii 6,800 metrik ton oo qiiqa CO2 ayaa la iska ilaalin doonaa - taas oo u dhiganta in 1,500 oo baabuur laga saaro wadada. Mashruucyada la soo jeediyay waxaa ka mid ah bedelida kuleyliyaha kuleylka ee dhismaha xafiiska warshadda daaweynta iyo qalabka kuleylka ee propane ee xarun kale oo leh tikniyoolajiyad kuleylka lagu xakameyn karo. Mashruuc kale wuxuu rakibi doonaa nidaam cusub oo soo kabasho kuleyl ah oo u heellan kaas oo la jaan qaadi doona nidaamka maareynta tamarta jirta si loo yareeyo kuleylka iyo qaboojinta saacadaha waqtiga shaqada in ka badan 60%.
Degmada Dugsiga Beytel, $ 285,000
Central Puget Sound Transit Transit Auth., $ 197,000
Degmada Dugsiga Chewelah # 36, $ 224,103
Magaalada Auburn, $ 500,000
Magaalada Bellingham, $ 496,000
Magaalada Clarkston, $ 52,695
Magaalada Cle Elum, $ 136,389
Magaalada Granger, $ 38,847
Magaalada Mossyrock, $ 26,658
Magaalada Stevenson, $ 314,633
Degmada Dugsiga Colville, $ 233,772
Dugsiyada Dadweynaha ee 'Federal Way', $ 98,061
Degmada Franklin Pierce School, $ 178,984
Kuliyadda Green River, $ 250,000
Dugsiga Degmada Kettle Falls, $ 373,214
Degmada King, $ 500,000
Degmada Dugsiga Mercer Island, $ 373,427
Degmada Dugsiga Mount Vernon, $ 225,000
Maktabadda Gobollada Waqooyiga Dhexe, $ 299,952
North School Dugsiga Degmada, $ 314,905
Iskuulka Northshore School, $ 350,000
Maareynta Xarumaha Degmada Pierce, $ 185,000
Degmada Dugsiga Tumwater, $ 183,552
Degmada University Place School, $ 116,000
Waaxda Asluubta ee Washington, $ 320,112
Doomaha Gobolka Washington, $ 500,000
Degmada Dugsiga White River, $ 188,705
Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown wuxuu xusay in 14 ka mid ah mashaariicda la siiyay maalgelinta ay ku jiraan miyiga bariga Washington iyo degmooyinka iskuullada. "Hagaajinta waxtarka tamarta waa habka ugu kharashka badan ee wax ku ool ah ee lagu ogaan karo kaydinta degdegga ah iyo muddada-dheer, labadaba marka la eego kharashyada hawlgalka iyo qiiqa kaarboonka," ayay tiri. "Maalgashiyadan ayaa gacan ka geysanaya xoojinta bulshada iyaga oo u fasaxaya ilaha bulshada ee kooban ee baahiyaha kale ee tartamaya."Tamarta Cadceedda. Qiyaastii $ 1.7 milyan ayaa lagu maalgelin doonaa 11 mashruuc oo solar ah oo la soo jeediyey oo marka ay hawl galaan soo saari doona awood ku filan si loo badbaadiyo in ka badan $ 80,000 kharashka tamarta iyo in ka badan 450 metrik ton oo ah qiiqa CO2 sanadkiiba. Sideed ka mid ah mashaariicda ayaa la gudoonsiiyey wadar ahaan ku dhowaad $ 1.6 milyan oo maalgelin isku-dhafan oo ka timid barnaamijka deeqda Kala-guurka Dhuxusha ee TransAlta Centralia.
Magaalada Colville, $ 254,000
Magaalada Granger, $ 145,000
Magaalada Pullman, $ 183,000
Magaalada Sequim, $ 75,000
Degmada Franklin Pierce School, $ 65,643
Degmada King (laba mashruuc), $ 185,972 iyo $ 164,028
Magaalada Fairfield, $ 268,000
Magaalada dekedda Jimcaha, $ 235,000
Magaalada Reardan, $ 29,027
Degmada Dugsiga Tumwater, $ 70,705
Rep. Bet Doglio sharciyada waxtarka tamarta ee kafaala qaaday Olympia sanadkan. “Waxtarka tamarta iyo kaalmada qoraxda waxay muujineysaa in gobolka Washington uu 'socon karo socodka' marka ay timaado kaabayaasha cagaaran iyadoo la sameynayo casriyeyn taas oo sidoo kale keydineysa canshuur bixiyeyaasha lacag. Wadajir cusub dadaallada siyaasadeed ee la xiriira dhismooyinka cagaaran iyo heerarka waxtarka qalabka, waan sii wadaynaa hogaaminta wadada si loo yareeyo wasakheynta kaarboonka iyo isticmaalka tamarta, ”ayuu yiri Doglio. Kaydinta kaarboon ee mashruucyadan waxay u dhigantaa qiyaastii 8,500 hektar oo kayn ah, adeegsiga tamarta ayaa looga baahan yahay 1,200 guri ama 1,500 oo rakaab ah. Tixraac Xisaabiyaha u dhigma gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee qiyaasta kaarboonka dhabta ah ee la keydiyay. Goobtani waxay isbarbar dhigi doontaa kaarboon lagu keydiyo tallaabooyin kala duwan, sida gawaarida maylalka la wado iyo hektarrada dhirta la beeray Dhammaan abaal-marinnadan deeqda ah ee lagu tartamo waxaa shardi u ah fulinta heshiisyadii ugu dambeeyay ee mashruucyada iyo qandaraasyada waxqabadka ku saleysan ee Ganacsiga. Waxtarka tamarta iyo barnaamijka deeqda qorraxda waxaa lagu maalgeliyaa miisaaniyadda raasumaalka gobolka si loogu bixiyo tamarta iyo kaydinta kharashka hawlgalka ee hay'adaha tacliinta sare ee dawladda ee gobolka, xarumaha dawladda hoose, hay'adaha gobolka iyo degmooyinka K-12. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijka, ama si aad u eegto fursadaha deeqaha ee hadda jira, booqo https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/energy/energy-efficiency-and-solar-grants/.
Ku saabsan Ganacsiga Ganacsigu wuxuu la shaqeeyaa dawladaha hoose, ganacsiyada, ururada ku salaysan bulshada iyo qabaa’ilka si loo xoojiyo bulshada. Qaybaha kaladuwan ee waaxdu ka kooban tahay in ka badan 100 barnaamijyo iyo iskaashi wax ku ool ah oo dowladeed iyo mid gaar loo leeyahayba waxay dhiirrigelisaa bulsho joogto ah iyo horumar dhaqaale si looga caawiyo dhammaan reer Washington inay barwaaqoobaan. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo http://www.commerce.wa.gov. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan helitaanka ama ballaarinta meherad ku taal Washington, booqo doorowashingtonstate.com. Rukumo warsaxaafadeedyada ganacsiga iimayl ahaan. Waad ka bixi kartaa wakhti kasta.
barnaamijyada raasumaalkaTiknoolajiyad nadiif ahdeeqokaabayaashaWar-saxaafadeedWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← War wanaagsan ayaa maanta laga shaaciyey Oslo, Norway Guddiga Hawlaha Dadweynaha ayaa hadda aqbalaya codsiyada amaahda →